အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်အလုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မည်သို့မည်ပုံ expatriates? 🥇
အကောင်းဆုံးကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်အ site ကို Naukrigulf
ဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Finder ယောဘက်ဘ်ဆိုက်
အင်ဒီးယန်းပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စုဆောင်းမှုပေါ်တယ် အဓိကအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများမြှင့်တင်ဘို့နေသူများကဖန်တီး။ အဓိကအားဖြင့်အိန္ဒိယအဘို့, ပါကစ္စတန်နှင့် တောင်အာဖရိကအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအံ့သြဖွယ်န်ဆောင်မှုများ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုဈေးကွက်ကိုကျော်မြင့်သောအခွင့်အာဏာတည်ဆောက်ကူညီပေးသည်။
အင်ဒီးယန်းအဘို့အများအပြားဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်အလငျး၌ အဆိုပါ GCC အတွက်ပြည်တော်ပြန်များနှင့်ရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေစတင်ရန် အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေ။ ထူးခြားကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်းအခြားသူများအားနှိုင်းယှဉ် ယူအေအီးကုမ္ပဏီ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပေးသူကိုစကားပြော WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှု န်ဆောင်မှု in GCC နိုင်ငံများ.
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများကိုကူညီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကလူစုဆောင်းဖို့အတော်ကြာဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများမှကူညီပေးနေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အိန္ဒိယလူမျိုးပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များစကားပြော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖြစ်ပါသည် နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေအိန္ဒိယကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီ။ ၏ဗဟိုမှာတော့ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့န်ထမ်းခေါ်ယူမှုစျေးကွက်. အဆိုပါ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကကျော်ကောင်းစွာအလုံအလောက်အလုပ်လုပ်ကိုင် အလုပ်တွင်ကျယ်စွာနယ်ပယ်စျေးကွက်.
အဆိုပါသရုပ်ပြ ဝိညာဉ်တော်သည် of ဒူဘိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအခြားသူများကိုအဓိကစုဆောင်းကုမ္ပဏီများကူညီပေးနေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုအလေးပေးရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတစ်နည်းနည်းအလုပ်ရှာဖွေသူများအကြံပေးနေကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများတစ်ခုအံ့သြဖွယ်သော့ချက်အချက်အကွံဉာဏျရာပူဇော်သက္ကာကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အတွက် အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်. သူတို့အခွအေနမြေားရ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေး. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်လာသည်။
ကျနော်တို့ပေးအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားထားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အသစ်ပြည်တော်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်အားအထူးဖြစ်ပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပြည်တော်ပြန်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုအဖွဲ့ကအလုပ်ရှင်, ်ထမ်းခေါ်ယူမှု, နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အေဂျင်စီများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်။ ထိုအကြိုးသကျရောအတွက်, ကျနော်တို့အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များဘို့သင့်ကိုအားမရနေကြတယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်သငျနှငျ့အတူသငျသညျကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် ငှားရမ်း မန်နေဂျာများ။ သွယ်ဝိုက်အဆက်အသွယ်များအတွက်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ဒူဘိုင်းဘလော့ဂ်၌အကြှနျုပျတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်အဖြစ် ယူအေအီးမှရွေ့လျားဘို့ညွှန်ကြားချက်။ ကျနော်တို့လူမှုမီဒီယာအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုကိုငါတို့အပေါ်မှာရောက်ရှိရန်ကူညီ လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်နောက်လိုက်အနည်းငယ်သန်းပေါင်းများစွာသော.
အဆိုပါအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စုဆောင်းမှုဈေးကွက်အကျိုးဆက်ရွေ့လျားနေသည်။ ကြောင်းများအတွက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ် ကုန်စည်ပြပွဲ 2020။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစိုးရလေဆိပ်များအတွက်ငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ။ သို့သော်အပြုသဘောဘက်မှာ, သင်ပိုပြီးဆက်စပ်ဆောင်းပါးများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဟော ပြော. သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်အဘို့မြေကိုကူညီသင့်ပါတယ်။
အသစ်ကအလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုဟာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုမေးမြန်း hအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ ow?။ သူတို့ပဲယူအေအီးမှကျော်လာကတည်းက။ သာခရီးစဉ်ကိုဗီဇာရှိခြင်းနှင့်မည်သည့်အလုပ်ရှာနေ။ သင်နှင့်အတူလုံးဝရိုးသားဖို့။ ဒူဘိုင်းလာရောက်လည်ပတ်စဉ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကြောင့်, အချိန်ကြာပါတယ်။
အပြုသဘောဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနေဆဲသင်ကူညီနိုင်သည်။ အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်သို့မဟုတ်တောင်အာဖရိကများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာနေစဉ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အတော်ကြာ tools တွေရှိပါတယ် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကို Group မှ Links များ။ ကျိန်းသေသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း အဆိုပါ GCC အတွက်အလုပ်ရှင်များရောက်ရန် တိုင်းပြည်ကိုသူတို့နှင့်အတူစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစူပါအပြုသဘောဆောင် ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်။ ကျနော်တို့ကသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမဲအခြားသောလမ်းထားရန်ကျွမ်းကျင်သူများအကြံပြုသည်။ သို့တိုင်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်နေရာချထားရှာတွေ့ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခု။ သွားနှင့်ရန်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးအတွက်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် drop။ ရှေးအကျဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခု။ သို့သော်နေဆဲမှီတိုငျအောငျအလုပ်ဖြစ်တယ် ယခုအလုပ်ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေ.
၏ရည်ရွယ်ချက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အလုပ်အကိုင်အကူအညီနဲ့။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ WhatsApp ကိုဦးတည်ပြောင်းရွှေ့ ဂျော့ဘ်အဖွဲ့များနှင့်ပို့စ်တင်အလုပ်အကိုင်များနေ့တိုင်း။ 520,000 ကျော် ပါကစ္စတန်ကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများ ဒူဘိုင်းမြို့ထံသို့လာကြ၏။ သူတို့ကစော်ဘွားအတွက်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့သောမျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူ. အဓိကအကြောင်းပြချက် ယူအေအီးရွေးချယ်ရာတွင်ဘာဖြစ်လို့လူတွေအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ GCC ဒေသလစဉ်လတိုင်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ထိုအခွင့်အလမ်းတွေကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေဘို့ အခြားသောဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုများသည်။
စဉ် ရွေ့လျားပြည်တော်ပြန် အဆိုပါအကျိုးအမြတ်အလုပ်အကိုင်အဘို့အထွက်ရှာဖွေနေများအတွက်။ အမြန်ဆုံး အဘို့အလမ်း တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်။ နီးပါးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ပွဲချင်းပြီးလုပ်သားများအပေါ်။ ရေရှည်အလုပ်အကိုင် ကျိန်းသေလက်ျာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတာအတွက်ကူညီခြင်း။
ထောက်ပြနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအလည်အပတ်ကြည့်ရှုရန် အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်s ပင်လယ်ကွေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဘလော့ဂ်ကျော်။ သငျသညျအများအပြားဆောင်းပါးများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်ရန်အာရုံစိုက်မှုနှင့်အတူ။ လူတိုင်းမတစ်ဦးဖြစ်လာသောကြောင့် ခုနစျပါးစော်ဘွား၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဒါမှမဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်ရိုးရိုးပါပဲ။ ဤအတူစိတျထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်တစ်ဦး loo ရှိ ပြောင်းလဲမှုကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစီအစဉ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော WhatsApp ကိုအပေါ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကသင်တို့အဘို့စုဆောင်းမှုသတင်းအချက်အလက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အတွင်းနောက်ထပ်အကူအညီကိုထုတ်ယူခဲ့ ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်။ သင်ကနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူသငျသညျရနိုင် အလုပ်တစ်ခု in တစ်ဦးပြည်ပရှိအဖြစ်ဒူဘိုင်း။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မြှင့်တင်ရန်နေစဉ် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ။
တော်တော်များများရှိပါတယ် စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အဘို့လမ်းညွှန်။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့သူတို့အများဆုံးသင်သာအချို့သောသတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်း။ ပတ်သက်. ရှည်လျားသောဆောင်းပါးများကို ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်တစ်ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှရှိသနည်း။ အဘယ်မှာရှိယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုလျှောက်ထားရန်။ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်ကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို ?. ဒီဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအဘို့စစ်မှန်တဲ့လမ်းညွှန်ထားကြပါတယ် ယူအေအီးသွားရောက်ခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှကြသည်သောသူတို့အဘို့.
တချို့ကဘလော့ဂ်ဂါ သူကိုပိုပြီးအသွားအလာရဖို့ရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် copywriters သင်၌များစွာသောတန်ဖိုးကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအတူစိတ်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်ဘို့ငါတို့ WhatsApp ကိုအုပ်စုများသို့သွားရောက် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်ထဲမှာ။ ဒါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးဌာန၌အလုပ်အကိုင်အရယူခြင်းလွယ်ကူသောခဲ့ဘူး။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ အလုပ်အကိုင်အကြောင်းကိုအများအပြားဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီအင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများနှင့်ကုမ္ပဏီန်ဆောင်မှုများ ကျိန်းသေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်သင်ကအလုပ်ယူအေအီးအတွက်ဘဏ်ထဲမှာရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အတူ coupled ဒူဘိုင်းတွင် MBA ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်။ သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေအနီးဆုံးအနာဂတ်အတွက်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပိုပြီးအပိုင်းပိုင်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီန်ဆောင်မှုလက်အောက်တွင်သင်သည်တတ်နိုင် အဖုံးအက္ခရာများရေးသားခြင်းအကြောင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေ။ ဥပမာဖိလစ်ပိုင်အလုပ်ဆောင်းပါးရှာဖွေနေ။ ကျနော်တို့အပေါ်ဖိလစျပြည်တော်ပြန်များအတွက်ပြီးစီးခဲ့သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြဘယ်မှာ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ အင်ဒီးယန်းပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကိုဘယ်လို ?. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ဖူး နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
ယူအေအီးအဘို့အ Discover အခွင့်အလမ်းများ
တစ်ဦးတိုးရစ်အဖြစ်ယူအေအီးသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာဆီသို့ရွေ့လျား။ တဖြည်းဖြည်းစျေးကွက်အလားအလာသဘောပေါက် တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်။ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ဒူဘိုင်းဗီဇာနှင့်အတူဘယ်လိုအံ့သြဖွယ်ရှိပါသလဲ။ ပြီးတော့သင်ဤသည်သင်၏ဇာတိမြေဖြစ်သင့်ကိုငါသိ၏။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲခြင်း ဆက်သွယ်မှုများ၏ခိုင်ခံ့ပိုက်လိုင်း.
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဟော ပြော. အသငျသညျအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်. ထို့ပြင်မုချသင်သည်တတ်နိုင် 2018 နှင့် 2019 နှစ်အကြား Sharjah အတွက်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ hit။ သငျသညျသွယ်ဝိုက်ရိုးရှင်းစွာသည်အခြားအလုပ်အကိုင်များပေါ်တယ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုပြီးကြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှအကြံပြုကြသည်။ သို့မဟုတ်တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလူကြီးမင်း၏ CV ကိုမြှင့်တင်ဖို့ဘယ်လို။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် GCC အတွက်ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီမှာဖြစ်ကြသည်။ အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိဆက်သွယ်မှုရောက်ရှိဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျ Spotlight နိုင်ပါတယ် တစ်ဦးကောင်း ်ထမ်းရှာဖွေသူ ထဲမှာ ယူအေအီး. ဘယ်လိုအကြီးတန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအထဲက Find HR ဒါရိုက်တာဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းနေကြသည်။ အဘယျသို့သောအရပ်သည်အကောင်းဆုံး သငျသညျဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီမှပြောင်းရွှေ့ဖို့နည်း။ ထွက်ရှာတွေ့ how ငါတို့သည်သင်တို့ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိအခြားပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေရောက်ရှိရန်ကူညီနိုင်သည်။
နှင့်အထွေထွေပြည်သူ့အလုပ်ရှင်များသင်တန်း၏။ အတိအကျ, သငျသညျ, ထိပ်ဆုံး rated ကုမ္ပဏီများထိမှန်ပါလိမ့်မယ် ထဲမှာ ပါကစ္စတန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ယူအေအီး။ ယင်းမှနိဂုံးချုပ် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်အမျိုးအစားများ အင်ဒီးယန်းအဘို့, သူတို့ကစိတ်ဝင်စားနေလျှင်။ ဤအချက်များပေးထား, သင်ကပိုမြန်လမ်းအတွက်သင့်ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အနှစ်သာရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပြီး၏ရလဒ်အဖြစ် GCC အုပ်စုန်ဆောင်မှုများ။ သင်သည်မြို့၌ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်အလုပ်ရှင်များကအများစု ရှာဖွေနေသာလုပ်သားများဗီဇာသွားရောက်ကြည့်ရှု။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ဒူဘိုင်းအတွက်အများအပြားစတင်ရှိပါတယ်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစု ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများငှားရမ်း.
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှာတော့သင်သည်တတ်နိုင် လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများမှကနေရှေးခယျြ။ Up ကို Extreme ကောင်းစွာပေးဆောင်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိရာထူးနှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းရန်။ အဲဒီမှာသူကအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်သင်တို့အဘို့ကိုသာရန်သူ။ ဥပမာအနေနဲ့အလုပ်အကိုင်အစာကိုရရနျ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်များကနေ။ သငျသညျကိုအနည်းဆုံးခြောက်လစာအုပ်ဆိုင်ကျိန်းသေလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တဖန်သင်တို့က start တချို့ငွေရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဘို့အကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်
တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ သို့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ အိန္ဒိယကနေ။ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကို Whatsapp UAE အဖွဲ့များမှာတင်ပါ။ သင်အဘို့အသုတေသနပြုနေတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာအလုပ်များ နေရာလွတ်။ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အပူဆုံးအပေးအယူတစ်ခုဖြစ်တယ်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ကလည်းသင်တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ချင်ပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရှာဖွေဝန်ဆောင်မှုကိုသရုပ်ပြရန်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦးကြည့်ရှိသည်နှင့် get ကျေးဇူးပြုပြီး သစ်တစ်ခု ကာတာနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ. အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျလုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူသင်၏ပရိုဖိုင်ကို update ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့သစ်ကိုရှာဖွေစုဆောင်းရန်သင့်အားသွားရောက်ခြင်းစတင်မည် မိုဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကွန်ယက်ကို join။ ငါတို့သည်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ငါတို့သည်သင်တို့အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
အသစ်ကပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်စီမံခန့်ခွဲရန် Task ရန်ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ထိုစိတ်သဘောကိုအတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ ချိတ်ဆက်နှင့်အခြားစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီရည်ရွယ်ချက်ကစော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေသင့်ကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုများမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌သောကြောင့် အင်ဒီးယန်းအဘို့အဂျော့ဘ် ပြည်တော်ပြန်။ ကျနော်တို့အတွက်အဓိကအခိုငျအမာများမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုစျေးကွက် အာရှအလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။
ထိုကြောင့်သင်သည်လျှင်ကမ္ဘာ့အများဆုံးလိုအပ်နေတဦးတည်းအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဒူဘိုင်း ရာထူး နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရာထူး။ သင်စဉ်းစားသင့်သည် ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာ။ အဲဒီလိုလုပ်ရန်သင်လိုအပ်သည် အလုပ်စုဆောင်းမှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးန်ဆောင်မှုများ. အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးစင်တာဧရိယာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အိန္ဒိယလူမျိုးပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။
အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများ၏ဘုံအမှား။ ကျိန်းသေဘူဒါဘီရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ, သငျသညျအဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်းအလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်။ သေချာဘို့သင့်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်ဆောင်းပါးများရာပေါင်းများစွာရှာနေရက်သတ္တပတ်သုံးဖြုန်းရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အမြဲချုံ့ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ကြိုးစားနေ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူများအတွက်သတင်းအချက်အလက် နှင့်ဒေသခံက်ဘ်ဆိုက်များမှ ယူအေအီး.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီရှိရာသာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး LinkedIn တို့မြင်ကွင်းမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ် 5X အားဖြင့်နှုန်းထားများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအပြင်, သင်သည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ကို join ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုမေးလို့ရပါတယ်။ ၏ရည်ရွယ်ချက် ဒူဘိုင်းချိတ်ဆက်နှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဖိတ်ကြားချက်ကို။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါခင်မှာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှ သငျသညျအဘယျအလုပျကိုတှေ့မွငျနိုငျဘို့။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတိုတောင်းတဲ့လမ်းအတွက်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နယူးဧည့်သည်များရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူဘယ်လိုဒူဘိုင်းသွားနှင့် အလုပ်အကိုင်အဘို့အရှာဖွေရေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အပေးထားသောအချိန်အတွက်ကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာတစျခုက Google ဖြစ်ပါသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှု။ အသေးစိတ်နိဂုံးချုပ်တှငျကြှနျုပျတို့တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်နှင့် အလုပ်လက်ကူညီပေးနေရှာဖွေနေ။ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယလူမျိုးများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုပါ။
ထိုမှတပါး, ယူအေအီးအတွက်ကူညီပေးနေကျွမ်းကျင်သူများ အလုပ်အကိုင်အဘို့အကွံဉာဏျနှင့်အတူ။ ကုမ္မဏီမှအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု local ည့်သည်များအားခေါ်ယူစုဆောင်းမှုတွင်လမ်းညွှန်ပေးနေသည် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ။ နှင့် အခွင့်အာဏာပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေး။ သင်အင်တာဗျူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အနေဖြင့်ပြုမူသင့်တယ်ဘယ်လို။ အဘယ်သို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများ။ သုတေသနပြု အရှေ့အလယ်ပိုင်းအာရှစျေးကွက်အတွင်းသစ်ကိုအလုပျသမားမြားအတှကျ.
ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလည်ပတ်။ 50,000 အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများနှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်န်းကျင် Generate ။ ထိုအခါဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၌အကြှနျုပျတို့၏မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများအဖို့သူတို့ကို post ။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဤဝန်ဆောင်မှုကိုကျိန်းသေအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာထည့်ထားရမည်ကူညီပေးနေ။ ဒါ့အပြင် သငျသညျယူအေအီးမှဗီဇာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်စစ်ဆေး?။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကြောင်းနှင့်အတူကိုလည်းအထောက်အကူလက်ပေးခြင်း။ အထူးသဖြင့်အတူ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ အင်ဒီးယန်းပြည်တော်ပြန်များအတွက်။
ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာကျိန်းသေဒူဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှနယူးအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ဥပမာအားဖြင့်တောင်အာဖရိကကနေအလုပျသမားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပို့စ်တင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအများစုဟာ။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်းအတွက် စုဆောင်းရေးအုပ်စုများ။
ဒါကငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အားထုတ်မှုပဲ။ Dubai City Company သည်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ။ ယူအေအီးရှိကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်လူမှုမီဒီယာ profile များကိုစုစုပေါင်း။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင့်ကိုကူညီရန်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြောင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အ နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာဖွေကြောင်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကခြုံငုံသူတို့ရဲ့ client များအတွက်စီမံခန့်ခွဲကြောင်းအကျဉ်းသော့ချက်အချက်အတွက်နောက်ထပ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုကူညီပေးနေဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည် အာရှကနေယူအေအီးမှနေရာပြောင်းရွှေ့အတွင်းနောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုပါ။ ထိုအခါယူအေအီး၏မြို့တော်အတွင်းဧည့်သည်များအတွက်စဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအတူ။ ကျနော်တို့ကအရမ်းအလေးအနက်ထားသငျသညျနေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူနေကြသည်။ ထိုအနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦးရတဲ့ ဒူဘိုင်း အင်ဒီးယန်းအဘို့အဂျော့ဘ် သို့မဟုတ်အခမဲ့ကျွမ်းကျင်သူများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံဉာဏ်ကို။
တစ်ခုခုကိုအမှု၌, သင်အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေနေပါသည်လျှင်ဒူဘိုင်းအတွက်. သငျသညျအလုပ်အကိုင်စတင်ရန်အချို့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ပါတယ်. ဥပမာအားဖြင့်, ယူအေအီးအတွက်မော်တော်ယာဉ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖို့, သင်သက်သေပြရောင်းအားအောင်မြင်မှုအစီရင်ခံစာများရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, သင်အကူအညီနဲ့ရှာဖွေအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အသုံးပြုမှုကိုအကောင်းဆုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ အသုံးပြု. နိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်ဘလော့ဂ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထား, ငါတို့ကုမ္ပဏီလည်းအများကြီးပေးခြင်း ဒေသခံအလုပ်မုဆိုးများအတွက်သတင်းအချက်အလက်.
နေစဉ်တွင်သင်တို့ကို ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ဂျော့ရှာဖွေနေ။ အခြားအပြည်တော်ပြန်အဖြစ်အစာရှောင်ကိုသူတို့တဦးတည်းကိုရှာဖွေအဖြစ်အလုပ်ရှင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုရရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အများဆုံးဧည့်သည်လိုခငျြတယျ။ သင်တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်သည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ယူအေအီးသွားရောက်လည်ပတ်နေသောပြည်သူ့ ခိုင်ခံ့သောပညာရေးနောက်ခံရှိခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်, MBA ဘွဲ့ရအမှုဆောင်အရာရှိခံစားရသည်။ သို့မဟုတ်ပင်ပါရဂူဘွဲ့ပညာရေးနှင့်နေဆဲသင်တို့နှင့်အတူအလုပျအတှကျတိုက်ခိုက်နေပါလိမ့်မည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော ယူအေအီး၌ရှိသောကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အလုပ်အကိုင်အအကူအညီနဲ့။ အစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားသည်။ သငျသညျအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းမရှိပါလျှင်သင်သာရှိသည်နိုင်သောကြောင့် သငျသညျယူအေအီး၌ထားရမည်နိုင်ပါလိမ့်ခံရမျှော်လင့်။ သင်၌ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုတစ်ခုမှာ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဒူဘိုင်းအတွက်သင်ကြားရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအခြို့သောအသိပညာကိုသင်ယူနှင့်ငွေရှာဖို့အခြားသူများကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဘယ္လို တစ်ဦးကိုရှာဖွေ ဒူဘိုင်းတွင်နိုင်ငံခြားတွင်အလုပ်လုပ်သည်?
အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ငါတို့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌တည်၏။ စိတ်ဝင်စား Posted ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်အကြောင်းကိုဆောင်းပါး ဒူဘိုင်း၌တည်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသည်အဘယ်မှာရှိ နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေသူများအဘို့အထောကျအကူပွု။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားအပေါင်းတို့နှင့်တကွခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအရပျ၌ရှိသည့်အခါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအဖွဲ့တကယ်တော့, သင်စော်ဘွားလုပ်သားဖြစ်လာဖို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုတက် Sum မှစီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ ထိုမှတပါး, အကြှနျုပျတို့သညျအင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, တိုတောင်းထဲမှာအကျဉ်းအမြင်ယူပါ။ ထိုအကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်၌သင်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုသရုပ်ပြကြိုးစားပါ။ သငျသညျအလုပ်ရှင်များအဘို့သုတေသနစဉ်အတွင်းဤအချက်များပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်, အချိန် 2018-2019 အတွက်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင် crypto ငွေကြေးဂျော့ဘ် သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီနေ့သင်ကသင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်ပါ။
အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များလည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ယူနိုင်ပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကုမ္ပဏီသစ်အတွက် စုဆောင်းကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးများကို။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအထိဝန်ဆောင်မှုပေး။ အဆိုပါဝှမ်းမှပြည်တော်ပြန် ယူအေအီးမှပြောင်းရွှေ့ကမ္ဘာလုံး။ အင်ဒီးယန်းလူမျိုးများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အတွက် ၀ န်ထမ်းသစ်များတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးကိုလည်းပြည်နှင်ဒဏ်ပေးသည်။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက ဒါမှရတဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်း။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ အင်ဒီးယန်းပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအင်ဒီးယန်းပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ငါတို့သည်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ ယူအေအီးကျော် 120,000 အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသူထားရှိ။ ထိုအခါအလုပ်ရရန်ထိုက်တန်သည့်ကုမ္ပဏီများတွေအများကြီးရှိသေး၏။ ဥပမာ ယူအေအီးအတွက် Tata Consultancy Services။ နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များတစ်ဦးစျေးဝယ်စင်တာအတွက်ပေးထားပါတယ်။ ထိုမှတပါး, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်။
ကတည်းကငါတို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါး၏အဆုံးနီးပါးပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ အင်ဒီးယန်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ တစ်ခုတည်းသောဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုက သငျသညျစော်ဘွားအတွက်စတင်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်?။ ဖြေဟုတ်ကဲ့သည်နှင့်သင်သည်အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုရင်။ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင်၏ဝန်ဆောင်မှုမှာဖြစ်ပါတယ်။
နယူးငှားရမ်းမန်နေဂျာနှင့်ကုမ္ပဏီများလည်းကြိုဆိုနေကြသည်။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းကြသည်လျှင်သင်ကုမ္ပဏီရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူဖို့ကမ်းလှမ်းသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပို့စ်တင်နေကြသည်။ ငါတို့သည်ပင်တာဝန်ခံအခမဲ့သင်တို့အဘို့ကစီမံခန့်ခွဲနေကြ သီရိလင်္ကာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ ဒီအခြေအနေများအရ, သောအရပ်တို့ကိုအသေးစိတ်ဘို့ငါတို့ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အင်ဒီးယန်းပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်များမှာ သင်တို့အဘို့အဖွင့်!.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ သငျသညျယခုလမ်းညွှန်များရနိုင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်။